‘कुलमान भ्रष्टाचारी हुन्, बेकारमा देशको अर्बौं सक्काए’ – भन्दै जङ्गिन सरिता गिरी ! Bishal4You
‘कुलमान भ्रष्टाचारी हुन्, बेकारमा देशको अर्बौं सक्काए’ – भन्दै जङ्गिन सरिता गिरी !
काठमाडौँ – धेरैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि सकिनेबित्तिकै पुनः नियुक्ति सजिलै हुने सोचेका थिए । घिसिङले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा राम्रो काम गरेकाले यो स्वाभाविकै पनि हो ।
केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमात्र हैन सञ्चार माध्यममा समेत घिसिङको पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने आवाज चर्कै स्वरमा उठेको छ । उनका पक्षमा युवा प्रदर्शनकारी सडकमै उत्रेको समेत समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुन पनि दिनरात गरेर २४ घन्टामा १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) सहेका नेपालीहरूका लागि कुलमान घिसिङ चमत्कारका रूपमा प्रकट भएका थिए ।
उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । तर, केही अनियमितता भए पनि नेपालमा अहिले लोडसेडिङ छैन भन्न मिल्ने भएको छ । घाटामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित घाटाबाट उकासिएको छ भने वार्षिक नाफा कमाउने भएको छ ।
विडम्बना, यही सफलता कार्यकारी निर्देशक घिसिङका लागि गलपासो बन्न पुगेको देखियो । तालुकवाला मन्त्रालयबाट कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, पदावधि रिक्त रहने भयो ।
सत्ताको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा केही मोलतोल हुने, बिचौलियाको मध्यस्थता अनि पुनःनियुक्ति पनि हुनसक्ने देखिन्छ । घिसिङको अहिलेसम्मको छवि हेर्दा उनले सम्झौता गर्नुभन्दा पद छाड्न रुचाउलाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको स्वतन्त्र कार्यशैली र लोकप्रियता नरुचाएको अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्र्वमाओवादी समूह घिसिङका पक्षमा रहेको पनि प्रचार भइरहेको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सामाजिक सञ्जालमा प्रकट अभिव्यक्तिले पनि यही सन्देह पुष्टि हुन्छ । जेहोस्, घिसिङ सत्ताको कोपभाजन भएको पक्कै हो । र तजबिजमा शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको सन्देश यसले दिएकाे छ ।कार्यकाल नथपिएपछि कुलमान औपचारिक रुपमै बिदा भएका छन्।
कुलमान बिदा भइरहेका बेला पूर्वसांसद सरिता गिरीले ढल्केवर सबस्टेसको विषय लिएर कुलमान माथि प्रश्न उठाएकी छन्। ट्वीटर मार्फत गिरीले कुलमानको समयमा विभिन्न भ्रष्ट्राचार भएको दावी गर्दै प्रश्न गरेकी हुन्।
धनुषामा निर्माण गरिएको ४०० केभी ढल्केवर सबस्टेसन अनावश्यक रहेको भन्दै उनले उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार र राज्यको रकम को दुरुपयोग भएको आरोप लगाएकी छन्।
“कुलमान घिसिङ जाँदै हुनुहुन्छ । इनरुवा देखि ढल्केवर को ४०० केभी लाइनको अनावश्यक परियोजना भ्रष्टाचार र राज्यको रकम दुरुपयोगको चरम उदाहरण हो । अरबोंको क्षति भएको छ । त्यस्को जबाब कस्ले दिने ?”,उनले लेखेकी छन्।